पेरुमा भेटिए ५ सय वर्ष पुराना ३४० बच्चाका कंकाल - Everest Dainik - News from Nepal
पेरुमा भेटिए ५ सय वर्ष पुराना ३४० बच्चाका कंकाल
लिमा, पेरु । मानव इतिहासका कैयन् घटनाहरु समयक्रमसँगै सार्वजनिक हुने गर्दछन् । यस्तै नयाँ कुरा पेरुमा पत्ता लागेको छ ।
यो नयाँ कुरा हो मानव नरसंहारको । नेशनल जिओग्राफिकको एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्टमा तीनसय बढी बालबालिकाका कंकाल भेटिएका हुन ।
यो मानव इतिहासमा बच्चाहरुको सबैभन्दा ठूलो बलिदान भएको रिपोर्टमा टिप्पणी गरिएको छ ।
पेरुको उत्तरी प्रायद्विपमा भेटिएका यी कंकालहरुमा १ सय चालिस जना बालबालिका र २ सय शिशुहरुका रहेका छन् ।
शिशु र बालकहरुको यो बलिदान ५ सय पचास वर्ष कोलम्बियन साम्राज्यभन्दा अगाडिको चिमु साम्राज्यमा भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कंकालहरुमा ५ देखि १४ वर्षसम्मका १४० बालबालिका र १८ वर्ष मुनिका शिशुहरु छन् । यतिका शिशुहरु एकै स्थानमा राखेर किन हत्या गरियो भन्ने कुरा इतिहासका पानामा बन्द रहेको छ ।
This May 10, 2011 handout photo provided by National Geographic shows how the face of this child was painted withared cinnabar-based pigment, at the Huanchaquito-Las Llamas site near Trujillo, Peru. Archaeologists hypothesize that the chest was cut open to remove the heart as part the sacrificial ceremony. “Skeletal evidence clearly indicates that the children and camelids were sacrificed by cutting open the thoracic cavity,” the researchers reported. (Gabriel Prieto/National Geographic via AP)
अचम्म त के छ भने यसरी मारिएका बालबालिकाहरु पुरै धार्मिक संस्कार पुरा गरेर हत्या गरिएका छन् । कंकालको अवस्थिति र उनीहरुको अवस्था हेर्दा पुरै धार्मिक विधि विधान गरेर हत्या गरिएको देखिन्छ । बच्चाको अनुहारमा लेप लगाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो लेप उनीहरुको छाती काट्नु अघिको संस्कारको बेला लगाइएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
बच्चासँगै तीनजना वयस्कहरुका कंकाल पनि भेटिएका छन ।
आजदेखि फेरि जोर–बिजोर प्रणाली लागू, अन्य के छन् नयाँ नियम ?